विवाहको २७ दिनमा र हस्यमय मृ’त्यु भएकी विष्णुको केसमा सनसनीपूर्ण खुलसा, घरमा हजारौंको भिड !! (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar28media
विवाहको २७ दिनमा र हस्यमय मृ’त्यु भएकी विष्णुको केसमा सनसनीपूर्ण खुलसा, घरमा हजारौंको भिड !! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । पोखराकी विष्णु वरालको निधन वुटवलमा रहस्यम तरिकाले भएको थियो । उनको विवाह भएको २७ दिनमै श्रीमानको घरमा निधन भएको घ टना र ह स्यम भन्दै माइती पक्षले आवाज उठाएका छन् । विष्णुको माइतीको उजुरीको आधारमा प्रहरीले विष्णुको श्रीमान र सासुलाई पक्राउ गरेको छ ।
बुधवार विष्णुको श्रीमानलाई पक्राउ गरेको थियो भने विहिवार उनको सासुलाई पनि प्रहरीले प क्रा उ गरेको छ । घटनाको अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै दुई दिन अघि वुटवल स्थित प्रहरी कार्यालयमा विष्णुका माइती पक्षले ना रावाजी गरेका थिए । प्रहरीले जाहेरी नलिएको भन्दै वि रो ध गरिएको थियो । प्रहरी कार्यालय अगाडी भिड जम्मा भएपछि केही वेर वि वा द समेत भएको देखिएको थियो । पोखराकी विष्णु वरालको विवाह रुपन्देहीका प्रदिप भट्टराईसंग भएको थियो ।
विवाहको २७ दिनमा उनको र ह स्यम निधन भएपछि सो घटना वि वा दि त बनेको छ । माइती पक्षले सामाजिक सञ्जाल र युट्युवहरुमा घटनाको छानविन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । मंगलवार उनीहरु वुटवल स्थित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न जाँदा ब वा ल भएको छ । प्रहरीले ५ जनालाई मात्र कार्यालय भित्र जाने अनुमति दिएको थियो । तर ठूलो संख्यामा विष्णुका माइती प्रहरी कार्यालयमा पुगेर सबैले प्रहरी प्रमुखलाई भेट्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि वि वा द सुरु भएको हो ।
प्रहरीले विष्णुको सासुलाई प क्रा उ गर्न जाँदा उनको घरमा पनि ठूलो भिड जम्मा भएको देखिन्छ । । दुवै पक्षले मन पराएर विवाह गरेको भएपनि २७ दिनमै विष्णु श्रीमानको घरमै मृ त फेला परेकी थिइन् । विष्णुको माइती पक्षले घटना र ह स्य म भन्दै छा न विनको माग गरेका छन् । यो घटना अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
Previous Article दु:खद खबर- आफ्नै घरमा आरम गरीरहेका बुबाको अकालमय मृ’त्यु, छोरी र नातिनी गम्भिर घा’इते !!
Next Article दोस्रो विश्वयुद्धमा बहादुरी देखाएका स्व. तुलबहादुरको नाममा बेलायतमा रेल सेवा सुरु !